Uyilo Lomboniso Umboniso wemultimedia wanikezelwa kwisikhumbuzo seminyaka engama-20 yokusekwa kwakhona kweemali zikazwelonke. Injongo yomboniso yay kukwazisa isakhelo sobathathu emnye isiseko sobugcisa esasakhelwe khona, eyile, ezibhankini kunye neengqekembe, ababhali - amagcisa angama-40 abalulekileyo eLatvia ohlobo oluthile lobugcisa-kunye nemisebenzi yabo yobugcisa. Umxholo wumboniso uvela kwigrafu okanye ekhokelela kwindawo ephambili yesipensile, isixhobo esiqhelekileyo samagcisa. Ulwakhiwo lwegrafu lusebenze njengeyona nto iyintloko yoyilo lomboniso.
Ikhalenda Imodyuli yikhalenda efanelekileyo yeenyanga ezintathu ezinamaqhekeza angadityaniswa njengeemodyuli ezintathu ezinesakhelo se-cube ukuze uhlangane ngokukhululekileyo xa kulungele wena. Ubomi boYilo: Uyilo lomgangatho lunamandla okutshintsha indawo nokuguqula iingqondo zabasebenzisi bayo. Banikezela ukuthuthuzela ukubona, ukubamba nokusebenzisa. Zixutywe kukukhanya kunye nenqaku lokumangaliswa, ukucebisa indawo. Iimveliso zethu zoqobo zenziwe kusetyenziswa umxholo "Wobomi ngoYilo".
Ukujonga Iiwallpaper Ixesha, i-Fortime, i-Timegrid, i-Timinus, i-Timechart, i-Timenine luluhlu lweewashi ezisetyenziselwe ngokukodwa isixhobo se-I'm Watch. Iiprosesa zezentsusa, zilula kwaye zenziwe ngobuhle kuyilo, ukusuka kubuhlanga bexesha elizayo kwisitayile se-sci-fi ukuya kubuhlakani bedijithali. Yonke imizobo yobuso ifumaneka ngemibala eli-9-efanelekileyo kwiNdawo yokujonga imibala. Ngoku ngumzuzu omkhulu wendlela entsha yokubonisa, ukufunda nokuqonda amaxesha ethu. www.genuse.eu
Ikhalenda I-ZOO yikhithi yokubhaliweyo ephepheni yokwenza izilwanyana ezintandathu, nganye ikhonza njengekhalenda eneenyanga ezimbini. Yiba nonyaka ozaliswe lulonwabo nge "zoo yakho encinci"!
Ingqokelela Yokujonga I-ttmm izisa ukuqokelelwa kweewitchs zokusebenza, eyilelwe ii-smartwatches ezimnyama nezimhlophe 144 x 168 pixel izikrini ezinje ngePebble kunye neKreyos. Uya kufumana apha iimodeli ezili-15 ezilula, ezihle kunye nezinokubukeka. Kuba zenziwe ngamandla amsulwa, zifana kakhulu neziporho kunezinto zokwenyani. Eziwotshi zezona ziqoqosho kunye nolwalamano oluhle kakhulu ezakha zabakho.
Uyilo Lomboniso Ikhalenda Ukujonga Iiwallpaper Ikhalenda Idrowa, Isitulo Kunye Nedesika Combo Ingqokelela Yokujonga